इङल्याण्डमा कुन क्षेत्र कुन टियरमा? | We Nepali
नेपालको समय: ०२:०८ | UK Time: 20:23
२०७७ मंसिर ११ गते ११:४५
लण्डन । बेलायत सरकारले इङल्याण्डमा डिसेम्बर २ मा राष्ट्रव्यापी लकडाउन अन्त्य भएपछि विभिन्न क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणको दरका आधारमा तीन स्तरमा वर्गीकरण गरेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक सूची अनुसार कोरोना संक्रमणको अति जोखिमयुक्त क्षेत्र टियर ३ मा निम्न क्षेत्र परेका छन् :
कुन टियरमा के के गर्न पाइने, के के गर्न नपाइने ?
यस टियरमा परेका क्षेत्रमा घरभित्र र बाहिर अर्कोघरका सदस्यसित भेट गर्न पाइने छैन तर पार्क वा सार्वजनिक स्थलमा भने ६ जनासम्म भेट गर्न पाइने छ । बार, पब, रेष्टुरेन्टहरु बन्द रहने छन् । केवल टेकवे मात्र सेवा दिन पाउने छन् । अति आवश्यकबाहेकका पसलहरु खुल्ने छन् । घरैबाट गर्न सकिने भए काम घरैबाछ गर्न सुझाव दिइएको छ । वैवाहिक समारोहमा १५ जनासम्मलाई बोलाउन पाइने छ । प्रार्थना गर्ने स्थलमा एकाघरबाहेक अरुसित सम्पर्क गर्न पाइने छैन ।
यस टियरमा परेका क्षेत्रमा घरभित्र अरुसित भेटघाट गर्न पाइनेछैन । गार्डेनमा ६ जनासित भेट गर्न पाइनेछ। पब, रेष्टुराँ, बारहरु खानाका लागिमात्र राति ११ बजेसम्म खुल्न पाउने छन् । अन्तिम अर्डर १० बजे सम्म मात्र गर्न पाइने छ । वैवाहिक समारोहमा १५ जना र फ्यूनेरलमा ३० जना सम्म सहभागी हुन पाउने छन् । खेलकुद वा थियटरमा क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म बाहिर भए २००० जनासम्म र भित्रभए १००० जनासम्म सहभागी हुन पाउने छन् ।
घरभित्र ६ जनासम्म भेला हुन पाइने छ । पब, बार, रेष्टुराँहरु राति ११ बजेसम्म खुल्न पाउनेछन् । ६ जनासम्म घरमा बस्न पाउनेछन् । खेलकुद, थियटर आदिमा बाहिर भए क्षमताको ५० प्रतिशत वा ४ हजार जना वा घरभित्र भए ५० प्रतिशत वा १ हजार जनामा जुन संख्या सानो छ त्यति सहभागी हुन पाउनेछन् ।